Ndi igwe kwụ otu ebe n’ugwu n’eme ka calorie karie karie uzo ndi ozo? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Calories gbara ugwu igwe kwụ otu ebe - azịza bara uru
Calories gbara ugwu igwe kwụ otu ebe - azịza bara uru
Ndi igwe kwụ otu ebe n’ugwu n’eme ka calorie karie karie uzo ndi ozo?
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ka ịdị elu nke ụwa na-akawanye njọ, ka mgbatị ahụ ka ukwuu - gosipụtara n’eziokwu na-aga n’ihuọgba tum tumnwere ikeọkụelu nke 100calorie karịaọkọlọtọ gịokporo ụzọnọkwasi.Jul 27. 2018 Nov.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ifelata, ihe niile ị ga - eme bụ ịmunyekwu calorie ma rie ha oge niile, ị ga - eme nke ahụ ma site na ịgbanwere nri gị wee na - emekwu ahụ, ma ọ bụrụ na ị na - emega ahụ mgbe ahụ ajụjụ na - ebilite bụ egwuregwu bụ Ihe kachasị mma bụ ịkụnye calorie ndị ahụ ókè. Anyị atụleelarị ọdịiche dị n'etiti igwu mmiri na ịgba ọsọ na nnwale siri ike ma ugbu a chọrọ ileba ọdịiche dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ịgba ọsọ ka anyị wee nwee ike ịtọlite ​​ihe dịka anyị na-aga ụlọ nyocha physiology. N'ebe a na otu ịsa ahụ na anyị ga-agụnye sayensị taa. Anyị họọrọ ịnya ịnyịnya na ịgba ọsọ n'ihi na ha abụọ bụ ihe omume na ala ka anyị wee nwee ike ịmatakwu sayensị na nchịkọta anyị, mana n'ihi na ha abụọ na-ejikarị enyere gị aka ịkwụsị ibu, ee na tupu Site n'iji calorie tụlee onwe anyị, anyị chere na ọ bara uru ịlele vo Uru na ọghọm nke egwuregwu ọ bụla ọ na - enyere aka na osteoporosis site na nrụgide ọkpụkpụ na nkwonkwo, na nke abụọ, ọ na - etinye obere s zọọ na nkwonkwo anyị ma si otú a na-akpata obere ihe mmerụ ahụ.
Gba ọsọ na-achọ obere akụrụngwa ma enwere ike ịme ya ebe ọ bụla, mana ịgba ígwè na-achọ igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe karịa, ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbatị ahụ nwere igwe eji agba agba n'ime ụlọ yabụ enwere ụzọ ndị ọzọ, egwuregwu abụọ nwere ike ịbụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'agbanyeghị na ịgba ịnyịnya ibu nwere ike ọ dị ntakịrị karịa enwere ike ime ya na obere ntakịrị ike, ugbu a ị nwere ike site na njedebe ikpeazụ na-egosi ịgba ịnyịnya ígwè ogologo oge, n'ezie, ebe ọ bụ na ọ naghị enwe nrụgide. Anyị kpebiri iji calorie dị ka ihe dị n'ahụ anyị dịka ọtụtụ ndị maara nke a, ọ bụ ụzọ dị mfe iji tụọ ike na anyị bụ n'ezie. You ga na-ezo aka na kilocalories, nke bụ ihe na - egosi otu puku calorie, ebe ọ bụ na nke a bụ ọnụọgụ ị nwetara na nri ọ bụla, kamakwa na ndị na - ahụ maka ahụike gị, ee ugbu a, ị ga - eme ka ị ghara ifelata ị ga - eme ka calorie dịkwuo ọkụ. oge niile site na mgbatị gị na ihe ị na-eme kwa ụbọchị, wee rie nri na ihe ọ drinkụ drinkụ kwa ụbọchị.
N'iburu nke ahụ n'uche, ka anyị lelee otú anyị nwere ike isi tụọ calorie anyị ọkụ. Ugbu a enwere ọtụtụ nhọrọ, mana ụfọdụ ziri ezi karịa ndị ọzọ. Ugbu a ị nwere ike iji onye na-eme kalori calorie dị mfe ma n'ọnọdụ a tinye ogo gị na afọ gị. chọpụta ike ị rụrụ ọrụ na ya, mana ị ga-enweta ọnụọgụ siri ike na ya n'ihi na ọ ga-achọ ka kalkuleta na-achọpụta ihe ruru ka ike gị, nye gị ihe na-egosi calorie ole ị na-ere ọkụ.
Anyị na-ezu ike na ya, ọ ga-abụ a mma tracker ma ọ bụ a egwuregwu na-ekiri nwere ike ịlele obi gị ọnụego mgbe niile na-eme nke mere na ọ maara ike nke ị na-egosipụta na mgbe ahụ ikpokọta a na onwe onye data echekwara n'ebe ahụ iji nye gị a Inwe ike inyekwu ezi echiche nke calorie Anyị gbara onwe anyị ọkụ na-arụ ọrụ a, yabụ taa anyị ga-aga otu nzọ ụkwụ n'ihu iji tụọ usoro nri anyị na usoro kachasị atụ, yabụ anyị ga-aga ụlọ nyocha iji hụ kpọmkwem ihe nke ahụ pụtara. Anaghị m ege ntị ọzọ, daalụ maka iji ụlọ nyocha gị na oge gị taa anyị chọrọ ileba mmefu calorie na ịgba ịnyịnya anya anya na achọrọ m ịma etu anyị ga-esi mee nke ahụ yana otu anyị ga-esi tụọ ebe a. anyị ga-atụle ikuku oxygen nke a na-akpọkarị vo2 na ndị na-ebe a vo2 max, mana nke a ga-abụ obere. Ọ bụkwa oke ikuku oxygen ị na-eji eme ihe ike, ma dabere na nke ahụ, na nkwenye ole na ole ị nwere ike ịzụ mmefu calorie na nke ahụ dịgasị iche dabere na ebumnuche gị na gị na-arụ ọrụ ma anyị nwere oge dị ukwuu taa ma ọ bụrụ anyị kwesịrị ịhọrọ ụdị ọkwa abụọ iji chọpụta ihe onye nkuzi kachasị mma, echere m maka ihe ịchọrọ ime taa n'ihi na ị doro anya na ịchọrọ ile anya ọkwa nke ndị mmadụ nwere ike ijikwa ka anyị wee nwee ike ịkwa anyị 2, mgbatị ahụ mara mma. ikekwe Ọkwa 4, na mgbatị dabere na mgbatị nke nwere ike ịbụ mpaghara nke ndị mmadụ ga-echekwa maka oge ha oge, ma ị na-eme, mgbe anyị na-eme nha vo2 ị ga-ahụ nnukwu ọdịiche dị na Oxygen oriri si mgbanwe site na ịga ije na-agba ọsọ , kwa maka okwu ọ bụla, achọrọ m mgbanwe na ọsọ, ọ dị mma, achọrọ m ịhụ ihe nsonaazụ mụ na Heather nwere na ịlele calorie anyị ọkụ mgbe anyị na-agba ọsọ ma na-agba ịnyịnya. sie ike nso n'ọnụ ụzọ ya na mpaghara 4, mana m ga-etinye onwe m na ikike nke ikuku na mpaghara m iji mee ka ike sie ike Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ịgba ọsọ na-ere ọkụ karịa calorie karịa ịgba ígwè ka anyị wee nwee ike ịchọpụta ma nke a bụ ezi na ọ bụrụ na ihe dị iche n'etiti ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ zuru ezu, ọ bụ oge maka Jonathan ka ụfọdụ Mee ngụkọta oge na gbakọọ cardio pooh maka iche iche mgbalị n anyị dị nwetara ume anyị azụ Jonathan Achọrọ m anya na nọmba mbụ Nke mbụ, otú calorie m na-abịa site na ịgba ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ mgbe anyị lere ya anya maka otu elekere mgbe anyị na-agba ọsọ maka otu elekere ọ bụ ihe dị ka calorie 900 91 otu awa wee Viking 868 dị mma, yabụ nke ahụ bụ ego na-esite na 124 wee kwupụta ahịrịokwu ahụ nwere ọnụ ọgụgụ dị elu karịa nke mere na ihe kpatara ya bụ ihe doro anya na ọ dị ntakịrị karịa ya mere ọ na-eri obere karịa ya na usoro ike ike ị na-atụ anya na ọ ga-adị elu, yabụ nke ahụ bụ 1156 na-agba ọsọ na 994 site na ịnya igwe, yabụ ihe dị iche na-abịa pụta a bit ọzọ na 212.
Echere m na ọ dị mma ịsị na anyị abụọ chere na ịgba ọsọ ga-abụ ụzọ nke obere nnwale anyị ebe a, nke o mere, n'ihi na ihe omume ịkụ nzọ ọka nke egwuregwu ahụ na eziokwu ahụ bụ na ọ dị nso ịgba ịnyịnya ígwè na ahụ dum bụ na ọ nwere uru a, mana ịgba ịnyịnya ígwè nwere ike ime ogologo oge karịa ma ọ bụrụ na ịnwe oge dị ukwuu n'akụkụ gị, ọ nwere ike ịka mma iji ịgba ịnyịnya gbaa ọtụtụ calorie, mana echere m na ịgba ọsọ bụ ụzọ kachasị mfe maka m ifelata, n’otu aka n’ihi na ọ na-egbochi agụụ m, n’otu aka n’ihi na mgbe m nwetara ihe dị ka nke a, m na-a coffeeụ kọfị na achicha mara mma mgbe niile, nke ugbu a adịghị njọ ma ọ bụrụ na ị nwere otu n’ime Egwuregwu ndị a ma ị nwere ike ịdị njikere ịnwa tufuo obere ibu biko mee ka anyị mara ma biputere ya na nkọwa ka anyị wee nwee ike ịnụ maka ya. Enwere olile anya na ị nwere mmasị na edemede anyị biko biko nye mkpịsị aka gị aka karịa Findchọta ụwa niile na ihuenyo ma chọọ isiokwu ndị ọzọ niile anyị mere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu anyị mere banyere calorie na-efunahụ, Ọtụtụ puku n'ime ha, anyị na-atụ egwu isiokwu a ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ntụnyere dị n'etiti igwu mmiri na ịgba ọsọ mgbe a bịara n'ihe oriri calorie ị nwere ike ịchọta ya ebe a n'okpuru
Ego ole ka calorie ị na-ere n’otu awa nke ịgba ịnyịnya ígwè n’elu ugwu?
agba olu mgbu
Bikgba ịnyịnya ugwu dị mma maka ụkọ ọnwụ?
Na-zuru ezuọgba igwe na-agba ọkụelu nke 600kaloriiheaka elekerema na - ewuli akwara na ogwe aka gị, azụ, obi, na isi.Ọgọst 25 2015
Ego ole ka calorie ị na-eji gbaa igwe kwụ otu ebe ruo nkeji iri atọ?
Bikgba igwe n’elu ugwubụọnwụ ọnwụnhọrọ nke ọtụtụ ndị anaghị elebara anya. Otú ọ dị, ọ na-enye ọtụtụurunke na-eme ya ụdị mmega ahụ dị egwu nke nwekwara ike ije ozi dị ka ihe ntụrụndụ ọfụma.Jenụwarị 17 2017 Nọvemba
Inggba ọgba ugwu ọ siri ike karịa ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ?
Ọ bụghị naanị na ị na-agba ịnyịnya dị mma mana ị na-eji ụdị anụ ahụ ọzọkarịankịtị ogologon'okporo ụzọ ịgba ígwèụbọchị. Naọgba tum tumenwere ihe mgbochi ndi choro ma okpukpu, mgbawa nke ike naanyịnya igwena-adịkarị arọ, nke, n'ozuzu na-eme ka a ukwuuSiri nnukwu ikerụpụta.Jenụwarị 21 2020 g.
Kedu ihe na-eme ka calorie ndị ọzọ na-agba ọsọ ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ugwu?
N'ikwu okwu n'ozuzu,na-agba ọsọchọrọỌzọikuku oxygen kariaịgba ígwèn'ihi eziokwu ahụỌzọmọzụlụ na-agagharị n'ogena-agba ọsọ. Nke a pụtara nana-agba ọsọn'ozuzuna-erekwu caloriekarịaịgba ígwè.
Ogologo oge ole ka ị ga-ebugharị iji gbaa calorie 500?
Ọsọ. Dabere na Harvard Health Publications, ihe ntụrụndụ 12 mphigwe kwụ otu ebeịnyịnya gaọkụOgbe 298kaloriọkara ọkara ọ bụla maka onye na-atụle 155 lbs. Onye a ga - eme yaigwe kwụ otu ebeihe dị ka otu elekere ruogbaa calorie 500 ume.
Ego ole ka m ga-efunahụ anyịnya igwe ugwu?
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịre calorie 300 ọkụọgba tum tum, Ikwesiri ibelata nri gị site na calorie 200 iji belata calorie gị kwa ụbọchị site na 500. A calorie deficit nke 500 ka 1,000 calories kwa ụbọchịgaMmụbaọnwụ ọnwụna ahụike dị mma nke otu na pound abụọ kwa izu.
Bikgba ugwu na-agba abụba afọ?
Ee,ịgba ígwènwere ike inyere akaida abụba abụba, ma ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ịkwalite n'ozuzuabụbaọnwụ na-akwalite ahụ ike. Iji belata n'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-eme aerobic omume, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.Bọchị 2 2021
Ego ole ka calorie ị na-ere n’ịnyịnya igwe?
Onu ogugu mmadu gha agba oku site na 450 rue 750 kwa ugbala. Ọnụ ọgụgụ nke calorie dabere na ịdị arọ gị, ọsọ na oge ejiri ịgba ịnyịnya ígwè. Jiri onye mgbako anyi mee ka mmadu chee echiche banyere calorie di oku na njem njem nke ikpeazu gi. Calories akpọ oku biking / ịgba ígwè mgbako
Kedu ihe kpatara ụmụ nwoke ji ere ọkụ karịa calorie karịa ụmụ nwanyị na ịnyịnya igwe?
Mụ nwoke na-ere calorie karịa ụmụ nwanyị n'oge ọgba tum tum. Nke a bụ n'ihi na ha nwere anụ ahụ karịa akwara na abụba karịa. Nọdụ ka ị na-agba ịnyịnya ígwè igwe gị na-agba ọkụ karịa calorie ma e jiri ya tụnyere iguzo. Nke a bụ n'ihi na iguzo na-eme ka obi gị dị elu ma na-amalite elu na isi ahụ ike.
Olee calorie ole n’otu awa ka ị na-agba ije hiking?
Ọmụmụ ihe na-egosi mgbe niile ihe omume ntụrụndụ ndị a na-ere ihe ọkụkụ 600-700 kwa elekere na ọkwa ike. Hiking n'ozuzu nwere a elu net caloric mmefu ebe ọ bụ na ọtụtụ hiking ụzọ ụkwụ nwere a ukwuu grajentị tụnyere ọtụtụ ịnyịnya ụzọ ụkwụ, ọhịa n'okporo ụzọ, na-agba ọsọ ụzọ.